Faah faahin Qarax xoogan oo ka dhacay duleedka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faah faahin Qarax xoogan oo ka dhacay duleedka Muqdisho
Ardaan Yare 3 September 2018 3 September 2018
Waxaa faah faahin dheeraad ah ay kasoo baxeysaa Qarax xoogan inta badan jugtiisa laga mqlay Xaafadaha ku dhow dhow Ex-koontorool ee duleedka Magaalada Muqdisho.
Qaraxan ayaa ahaa mid gaari nooca raaxada ah lagu soo xiray,waxaana gaariga saarnaa hal Askari oo ka tirsan ciidanka dowlada Soomaaliya,kaas oo qarxay, xiliga uu marayay Ex-koontorool Afgooye ee duleedka Muqdisho.
Dad goobjoogayaal ah ay ayaa inoo sheegay in hal Askari oo lagu Magacabo bootaan,uu qaraxaasi ka soo gaaray dhaawac culus,isla markaana mid ka mid ah lugihiisa ay go’day halka Gacanta uu dhaawac ka soo gaaray.
Sidoo kale waxaa qaraxa ku dhaawacmay dad shacab ahaa oo goobta ka agdhawaa xiliga uu qaraxa dhacayay ,waxaana loola cararay dhaawcyadooda goobaha Caafimaad ee ku yaalla Magaalada Muqdisho.
OIC Secretary General strongly condemns Terrorist attack in Mogadishu
Somalia: Former FESTU Secretary General arrested in Ethipia